होम | मुक्तिको उपचार
युनाइटेड वाटर प्रोजेक्ट
वितरक फेला पार्नुहोस्
व्यक्ति बन्नुहोस् तपाईं साँच्चिकै बन्न चाहानुहुन्छ!
आत्म निर्देशित सचेत विकासको लागि तपाईंको पूर्ण टुलकिट।
कन्डिशन्ड-प्रतिक्रिया र व्यवहार को तह मार्फत काट्नुहोस्, र तपाईं वास्तवमै को हुनुहुन्छ भनेर बन्नुहोस्।
अल्केमिकल ट्रिनिटी एक क्रान्तिकारी नयाँ कम्पनिक उपाय टूलकिट हो जुन तपाईं बन्नको लागि सक्षम बनाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो जुन तपाईं सँधै नै हुनुहुन्थ्यो।
ट्रिनिटीमा तीन रसायनिक कम्पनिय उपचारहरू समावेश छन्:
निलो कमल उपचार
यी तीन उपायहरू मिलेर काम गर्छन् जो हामीलाई बाँध्छ। यी प्रत्येक उपचार को सामाजिक कंडीशनिंग को पूर्ण अनावश्यक, आकृति र सम्झनाहरु जो हामीलाई सीमित विश्वास र व्यवहार गर्दैन जुन हामीलाई सेवा गर्दैन अवरोधमा पनी एक विशेष भूमिका खेल्छ।
टुर द उपचार
म यस फारम मार्फत मेरो विवरण एकत्रित लिबरेशन रेमेडीमा सहमति जनाउँछु।
आधुनिक युगको लागि प्राचीन कोमिकल टेक्नोलोजी
लिबरेशन मानव अनुकूलन र चेतना बढाउने उपकरणको नयाँ दायराको लागि मानक सेट गर्दछ। अल्कोमिकल उपचारको एक पुरातन संयोजन पुनरुत्थान र हालैमा आधुनिक टेक्नोलोजी पत्ता लगाइएको छ, नयाँ जीवन ल्याउन एक शक्तिशाली र गहिरो अभिनय अझै राम्रो जागरण उपकरण।
एक उपाय जो किमिक छाप र स्थिर भावुक मलबे को शुद्धि को माध्यम ले मन, शरीर र आत्मा को सक्रियता मा व्यक्तियों को समर्थन मा कुरा को कुरा मा कुरा गर्छन। यी ऊर्जावान नालीहरूबाट मुक्त बन्नु एक ब्याक शक्ति दिन्छ त्यसैले हामी सबै हुन सक्छौं जुन हामी सुरु, मुक्ति र नि: शुल्क हुनुको लागी हो।
पुरातन व्यञ्जनहरू पछ्याउँदै, आधुनिक युगको लागि प्राकृतिक अवयवहरूको एक सावधानीपूर्वक चयन गरिएको array, सारसहरू र अल्कोमिकल मिश्रणहरू।
उदारवादी र पवित्र आध्यात्मिक परम्पराहरूमा लिबरेशन नल। यसले मानसिक र भावनात्मक शुद्धिको लागि ऊर्जावान शक्तिलाई हटाउँछ।
मुक्तिको स्वाद र विश्वको पवित्र जलविद्युतहरूसँग मिलाएर तिनीहरूलाई सबैसँग एकसाथ जोड्न अनुमति दिंदा पृथ्वीको पानीलाई एकताबद्ध पार्दछ।
अरूलाई मुक्तिको साथ कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ?
अरूलाई के लिब्रेसनसँगको अनुभवको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ सुन्नुहोस्। शारीरिक, मानसिक, भावुक र आध्यात्मिक स्तरमा परिवर्तनको गुणहरू!
थप समीक्षाहरू हेर्नुहोस्
प्राचीन भविष्य प्रविधि
प्रकट भएको उत्पत्तिको रहस्य।
एक आध्यात्मिक र अल्कोमिकल टेक्नोलोजीले आफ्नो जीवनलाई अनुकूलन र पहिचान गर्न नयाँ तरिका सिर्जना गर्यो। लिबरेशनले नयाँ खोज टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ प्राचीन सूत्रको, अब सबैलाई उपलब्ध गराइयो।
फोकस, पावर र ब्यालेन्स
जब फोकस बाहिर पुरानो ढाँचा चलिरहेको बेला फोकस नगर्दा हामी कुनै पनि गतिविधि सहन हाम्रो सबै ऊर्जा ल्याउन सक्षम छौं। यो पनि यो अर्थ हो कि हामी अतीत मा हाम्रो समय बाजीन वा भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्दैनौं। यसले शरीरमा कम थकावटमा अनुवाद गर्छ, हामीलाई आरामको लागी कम हुनु आवश्यक छ किनकि हामी विश्रामबाट बाहिर निस्किन्छौं।
पुरानो फ्लु बाहिर, नयाँ को लागि कोठा बनाउनुहोस्
जब हामी आचरण पद्धति सफा गर्यौं भने हामी सामान्यतया हाम्रो इतिहासको भागको रूपमा व्यस्त छौं र मेमोरी सिक्यौं, हामी अब हाम्रो जीवनको भावनात्मक नाटकमा पकड्न सक्दैनौं। लिबरेशनले यसलाई सबैलाई सतहमा ल्याएर, महसुस गर्दछ र त्यसपछि एकपटक र सबैको लागि रिलीज गरेर यो गर्दछ। त्यसपछि भावनाहरू अतीतको बाहिरी दायित्व बिना कुनै पनि तरिकामा प्रतिक्रिया गर्न बिना उठ्न सक्छ र हामी तिनीहरूसँग संलग्न हुन सक्छौं वा न त उनीहरूको अत्यन्तै जालिएको जालमा फ्याँकिने को लागी।
त्यसो भए हामीले कमल को पानी मा गिरने को बिना पानी देखि फेंकने को विकल्प छ।
प्राकृतिक स्पष्टता पूरा गर्नुहोस्
तपाईंको प्राकृतिक राज्यमा घर फर्कनुहोस्
यस जीवनमा तपाईंको दिशा, उद्देश्य र मिशनको बारेमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट छ कि ऊर्जा भित्र ट्युन। लिबरेशनले एक आन्तरिक स्पष्टतामा खोल्ने एकलाई समर्थन गर्दछ, उनीहरूको आन्तरिक कम्पाससँग जोड्ने सुविधा, बहुतायत, सुख र उत्तेजनामा ​​हरेक क्षणमा एक गाइड दिन्छ।
तपाईंको उद्धार, प्रतीक्षा।
एक पूर्ण स्पेक्ट्रम प्राकृतिक आणविक सूत्र
सामाग्री को एक पूर्ण सूत्र, सावधानीपूर्वक तैयार, खारेज र संश्लेषित गर्न, LIBERATION।
9 रत्नबाट बनेको एक पुरातन रचनात्मक संरचना जसलाई प्रत्येकले 100 पटक जलाएको छ उनीहरूको गहन पुनरुत्थान र कर्मर्म सफाई क्षमतालाई पराजित गर्न।
एक खनिज पानी सफा गर्छ र विद्युत चुम्बकीय शील्डको रूपमा कार्य गर्दछ। किनकि रक्त प्रायः पानी हो यसले रक्तमा गहिरो र शक्तिशाली असर गर्छ जुन हाम्रो दिमागमा हुन्छ।
Dust एकत्रित र4बाट सशक्त आगो जुन अन्तिम 50 वर्षको लागि लगातार जलिरहेको छ। पाँचौं आगो सूर्य हो। यो आशले पचास वर्षको परिवर्तन र सफाईको आसुत ध्यान को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
एक दुर्गा भाइब्रेरी ध्वनि परिवर्तन परिवर्तन र परिवर्तन को लागि, घटनाहरु को पारित गर्न लाई अधिक सजिलै संग चीजहरु लाई स्पष्ट गर्न को लागी अनुमति
साना चीजहरूको सरल आनन्दको लगभग बच्चाहरूको त्याग उत्पन्न गर्छ, पहिलो पटकको तितली हेर्न बच्चाको भावना।
एक अनुकूलन मशरूम जसले सबै अवयवहरूलाई सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्दछ, तिनीहरूलाई संश्लेषण र सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत गर्दछ
ग्लोबलाइ मुक्त गर्दै।
स्थानीय र वैश्विक वितरकहरूको नेटवर्कको माध्यमबाट मुक्ति फैलाउँदै। यस शक्तिशाली उपायको माध्यमबाट ऊर्जाको ऊर्जा, जलविद्युत र मानिसलाई जोड्दै।
एक वितरक फेला पार्नुहोस्
छुट डायमण्ड - 10ml
निलो कमल - 10ML
लिबरेशन - 10ML
लिबरेशन मेडिकल अस्वीकरण
© प्रतिलिपि अधिकार 2018 सबै अधिकार सुरक्षित LiberationtheRemedy.com कथनहरू यस वेबसाइटमा खाना र औषधि प्रशासन द्वारा मूल्या not्कन गरिएको छैन। छलफल गरिएको वा विज्ञापन गरिएको कुनै पनि उत्पादन निदान, उपचार, उपचार वा कुनै पनि रोगलाई रोक्नको लागि होईन। प्रशंसापत्र परिणाम विशिष्ट छैन। ग्राहकहरूले आफ्नो प्रशंसापत्र पेस गरे पछि उपहार प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्दछन्। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ, नर्सि, गर्दै हुनुहुन्छ, औषधी सेवन गर्दै हुनुहुन्छ, वा चिकित्सा अवस्था छ भने, कुनै पनि आहार पूरक प्रयोग गर्नु अघि तपाईंको चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। Auto यस साइटमा प्रकाशित अफरहरू, AutoShip योजनाहरू सहित, खुद्रा ग्राहकहरूको लागि मात्र मान्य छ, व्यवसायीहरू वा थोक बिक्रेताहरू होइन। नि: शुल्क शिपिंग प्रस्तावहरू अमेरिकी ग्राहकहरूका लागि मात्र मान्य छन्।